हर्क साम्पाङमाथि पहिले लाठीचार्ज, अहिले फूल र अबिरको वर्षा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
हर्क साम्पाङमाथि पहिले लाठीचार्ज, अहिले फूल र अबिरको वर्षा
जेष्ठ ११, २०७९ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — एक वर्षअघि धरानको खानेपानीसम्बन्धी ज्ञापनपत्र लिएर जाँदा सामाजिक अभियन्ता हर्कराज साम्पाङ राईलाई नगरपालिकाको जुन प्रवेशद्वारबाट भित्र छिर्न दिइएको थिएन‚ मंगलबार त्यही प्रवेशद्वार उनकै स्वागतका लागि सजाइएको थियो ।
बिहानै दुईतिर पानीले भरिएको तामाको गाग्री फूलले सजाइएको थियो ।
निर्वाचित हुनुअघि जनताको माग लिएर जाँदा साम्पाङलाई नगरपालिकामा छिर्न नदिन फलामे प्रवेशद्वार बन्द गरिएको थियो । उनी प्रवेशद्वार नाघेर जान खोजेका थिए । धरानका तत्कालीन प्रमुख तिलक राई र उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई सम्बोधन गर्दै बाहिर निस्केर हिसाबकिताब देखाउन माग पनि गरेका थिए । त्यसबेला साम्पाङमाथि लाठीचार्जसमेत भएको थियो । तर यसपटक भने लाठीचार्जको ठाँउमा स्वागतसहितको फूल र अविरको वर्षा भयो ।
नगरपालिकाका कर्मचारीको स्वागतलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै फूलमाला र गुच्छा लिएर अगाडि बढेका प्रमुख साम्पाङलाई नगरप्रहरीले सुरक्षा दिँदै स्वागतका साथ स्यालुट हाने । कर्मचारी लाम लागेर फूलमाला र अबिर पालैपालो लगाइदिए । उनलाई स्वागत गर्न कर्मचारीहरू ‘तछाड मछाड’ गरेका थिए । स्वागत गरिसकेपछि उनीहरूले नै नवनिर्वाचित साम्पाङलाई ‘हजुर मेयर साप’ भन्दै कार्यकक्षसम्म पुर्‍याए ।
स्वागतको लाममा धरान उपमहानगरपालिकामा केही महिनाअघि खानेपानी आयोजनाको विषयमा विवाद हुँदा साम्पाङबाट पेचिलो गाली खाने अधिकृत र कर्मचारीहरू पनि थिए । साम्पाङले सबै नभए पनि केही कर्मचारी भ्रष्टाचारी भएको आरोप पनि लगाएका थिए । दलीय उम्मेदवार नभएर स्वतन्त्र र नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सिधा वादविवादमा उत्रेका अभियन्ता स्थानीय तहको चुनावमा एकाएक जनमत पाएर जितेपछि प्रमुख भएर आउदा केही कर्मचारीहरू भने सशंकित देखिएका थिए । केहीचाहीँ ‘हामीलाई यस्तै प्रमुख चाहिन्छ’ भन्नेहरू पनि थिए ।
साम्पाङले औपचारिक रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक धरानमा वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नेगरी एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने छन् । कार्यदलले धरानको कर वैज्ञानिक भए/नभएको, आयस्रोतहरूको पहिचान गर्ने र दररेट निर्धारणका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिने छ । सुझाव कार्यदलको संयोजकमा उपप्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघालाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने सदस्य सचिवमा राजस्व महाशाखा प्रमुख छन् । धरानमा ‘कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको’ भनेर व्यापक जनगुनासो सुनिँदै आएको छ ।
निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे पनि सञ्चारकर्मीसँग करिब १० मिनेट आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले आफू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा जितेर आए पनि सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र नागरिक समाजकै सल्लाह सुझाव र सहकार्य समन्वय गरेर धरानको विकास निमार्ण गर्ने, उन्नत सहर बनाउने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पनि बढिरहेको छ । हामी मिलेर नै विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने छौं । जनताको विश्वास कायम गर्न मैले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । यो चुनौतीपूर्ण छ तर हामी सबैको सहकार्यबिना म एक्लैले गर्न सक्दिनँ ।’ उनले खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न उत्पादन बढाउन र स्रोत बढाउन लिकेज रोक्ने र मर्मत सम्भारको काम सुरु गर्ने बताए ।
उनले सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाएर धरानमा ‘स्थानीय सरकार छ है’ भन्ने अनुभूति दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले दलीय कार्यकर्ता र दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने नगरवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अहिले जनताले अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि असल व्यक्तिलाई नै चुनेर जिताएका छन् । यहाँ आउने असल नै छन् । हामी जुनुसुकै दलबाट वा स्वतन्त्रबाट आए पनि मिलेर काम गर्ने भएकाले धरानको विकास रोक्न कसैले सक्दैन ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १३:१७
जनतालाई धोका दिन्नँ : नवनिर्वाचित मेयर साम्पाङ
सुनसरी — धरानमा एक दशकदेखि खानेपानी, सडक, सर्दु–सेउतीको गिटीबालुवा ठेक्का, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिति जस्ता विभिन्न समस्या देखाउँदै स्थानीय सरकारलाई समाधान गर्न दबाब दिने सामाजिक अभियन्ता हुन् हर्कराज साम्पाङ । विद्रोही स्वभावको छवि बनाएका धरान–१८ बुद्धचोक बस्ने सामाजिक अभियन्ता ३९ वर्षीय साम्पाङ धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बन्न सफल भएका छन् । साम्पाङ मेयरमा निर्वाचित भएपछि कान्तिपुरकर्मी प्रदीप मेन्याङ्बोले उनीसँग लिएको अन्तर्वार्ता :
गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र एमालेका उम्मेदवारलाई हराएर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पद जित्न सफल भएकोमा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
उहाँहरु हार्नु भएको छैन । उहाँहरु (एमाले र कांग्रेस) कै भोटर्सले मलाई भोट दिएकाले मैले जितेको हो । त्यसैले उहाँहरुसँगसँगै यो चनुाव जित्या छौं । यो स्वतन्त्रको जित हो । सबै पार्टीको जित हो । स्वतन्त्र र साझा उम्मेदवारको जित भएको महसुस गरिरहेको छु ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार मेयर हुनु भएको छ । अन्य जनप्रतिनिधि त कांग्रेस र एमालेका बहुमत छन् नि ? काम गर्न देलान् ?
कसरी काम गर्न दिँदैनन् ? कसले दिँदैन ? एउटा परिवार चलाउन पनि अर्काको छोरी ल्याउनु पर्छ । एक्लै त चल्दैन नि । म पनि उहाँहरु सबैसँग सहकार्य समन्वय गरेर नगरपालिकाको काम गर्छु । यत्रो उपमहानगरपालिका म आफैं चलाउँछु त ? एक्लै चलाउन सक्छु त ? सक्दिनँ । म एक्लैले खुशी गरेर हुँदैन पनि । त्यसो भएको कारणले हामी सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छौं । सबै राजनीतिक दललाई ससम्मान सहभागी गराउँछु ।
हिजोको दिनमा चुनावको बेला केके भनियो होला, उहाँहरुले पनि भने होलान्, त्यो त आफ्नो मेलो गरेको हो । तर भोलिको दिनमा त मलाई पनि उहाँहरुकै साथ सहयोग चाहिन्छ । राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज सबै मिलेर के गर्दा बेस्ट हुन्छ । धरान बनाउने हो । उहाँहरुले यो स्वतन्त्रबाट आएको मेयर हो, यसको प्रस्ताव सबै बल्झाउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले गर्नु हुन्न । उहाँहरुलाई सुशासन र विकासको मुलधारमा जोडेर लाने हो । म लान सक्छु त्यही क्षमता भएको मान्छे हो म । धरानको समग्र विकासका लागि म सबैलाई आह्वान गर्छु । मेरो क्षमतै नभएको भए मलाई जनताले जिताउने थिए त ? बजेटको कुरा गर्छन् । बजेट भनेको पाटीको नेताको गोजीबाट आउने पैसा होइन । जनताबाट संकलित कर हो । मैले जित्ने बित्तिकै नेपाल भन्दा बाहिर गइहाल्यो त धरान ? यसर्थ, मेरो समन्वयकारी भूमिका अझै दरिलो बनाउँछु ।
मेयरको रुपमा तपाईँ धरान उपमहानगरको कुर्सीमा पुगेकाले तपाईंको पहिलो प्राथमिकता के हो ?
खानेपानी । खानेपानीमा एक प्रकारको चुहावट छ, मर्मतसम्भारको लापरबाही छ । खानेपानीमा प्राकृतिक र कृत्रिम समस्या छ । खानेपानीको समाधान नभएसम्म म प्राय प्राय फिल्डमा हुनेछु । मैले गर्ने काम नै त्यही हो । त्यसपछि स्वास्थ्यको कुरा छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुधार्ने कुरा छ । शिक्षाका कुराहरु छन् । सबै कुरा यहा भनेर साध्ये नहोला यहाँ ।
तपाईं पहिल्यैदेखि विद्रोही स्वभावको । धरानका समस्या उठाउँदा धेरै विद्रोही भाषा पनि प्रयोग गर्नु भयो । अब मेयरको कुर्सीमा बसेपछि पनि विद्रोह नै गर्नुहुन्छ ?
अब मेरो भूमिका चेन्ज भयो नि । त्यहाँ पुगे पछि त म अब हाँसी मात्र रहनेछु । सधैंभरि कराइमात्र रहने ? अहिले तपाईंहरुले मलाई जति गालि गर्नुस म हाँसी मात्र रहन्छु । बरु तपाईंहरुले पनि धरान बनाउन सल्लाह सुझाव दिनुस् ।
प्राय मान्छे (नेता)हरु सत्तामा पुगेपछि बिग्रने गरेका छन् नि ?
म बिग्रन्नँ । यत्रो जनताले मलाई एउटा व्यक्तिलाई जिताइदिनु भएको छ । उहाँहरुको विश्वासमा घात गरेँ भने मलाई पाप लाग्दैन ? बिना पार्टीको एक्लै कुदेर संघर्ष गरेँ । लामो समयसम्म निरन्तर संघर्ष गरेकाले आज मलाई धराने जनताले मूल्यांकन गरेर यो माया (मेयर पद) दिनु भा छ । यत्रो माया दिने जनतालाई मैले धोका दिन मिल्छ ?
नगरपालिका र बीपी प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्नु भयो । अब कसरी ती बेथिति सफा गर्नुहुन्छ ?
नगरपालिका र बीपीमा केके बेथिति छ भन्ने त मलाई पनि थाहा छ । अब पहिला म एउटा अभियन्ताको रुपमा कराउँथेँ । त्यहाँ गइसकेपछि नारा जुलुस गर्छु भन्या होइन । त्यो त पहिलाकै शैली भइहाल्यो । त्यसैले अब मेरो भूमिका र शैली परिवर्तन हुन्छ । तर बेथिति सफा गर्नका लागि एक खालको पहल र दबाब भने रहन्छ ।
स्वतन्त्र मेयर स्थानीय सरकार प्रमुख भएको बेला संघ र प्रदेशले बजेट दिएन भने के गर्नुहुन्छ ?
मलाई नपत्याउने बित्तिकै सरकारको औचित्य नै सकियो नि त । म एक भोट ल्याएर जितेको होइन । मैले सारा धराने जनताको प्रतिस्पर्धीमध्ये पहिलो मत लिएर जितेको मान्छे । म स्थानीय सरकार प्रमुख हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय भएन भने सरकार कहाँ रह्यो र ? यो पुरानो खालको बुझाइबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । हामी विभिन्न परिवारका छौं । परिवार मिलेर एउटा समाज बनेको छ । त्यसरी नै विभिन्न पार्टीबाट हामी कार्यपालिकामा गएता पनि मिलेर नै काम गर्ने छौं । त्यहाँ कुस्ती हुँदैन । म उहाँहरुलाई हाँसीहाँसी मिलाउँछु । मिलाउन सक्ने क्षमता मसँग छ ।
तपाईसँग जनताले के आशा राखेका होलान् ?
धेरै आशा पनि राखेका छैनन् धराने जनताले । सामान्य आशा राखेका छन् । नगरबासीले पाउने सेवासुविधालाई चुस्तदुरुस्त गर्ने । त्यो म गर्छु ।
दलका उम्मेदवारले जितेर गएपछि नगरपालिकामा आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गर्ने गरेका थिए । तपाईंले चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
मेरो कार्यकर्ता नै छैन । म सबैभन्दा पहिला वर्कलोड हेर्छु , त्यसपछि म वर्कफोर्स हेर्छु । आफैं म धेरै स्टडी गर्छु । वर्कलोडचैँ छैन वकफोर्स धेरै राखेर त भएन । म्यानेजमेन्ट टिममा एउटा काम गर्ने मान्छे छ, चार जना सुपरभाइजर राखेर त काम हुँदैन । वर्कफोर्स बढाउनु पर्छ वकलोड अनुसार । मेरो कार्यकर्ता हो भनेर ए मलाई भोट दिएको सहयोग गरेको भनेर हामीले भर्ती गरेर काम छैन । हाम्रो इन्कम कति हो एक्सपेन्सेज कति हो ? यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर सोहीअनुसार काम हुन्छ । मसँग आएका सबै स्वफूर्त स्वयंसेवक भएर आएका मात्र छन् । कार्यकर्ता छैन । वकफोर्स र वकलोडकालागि फ्री कम्पीटिसशन हुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा मान्छेले जब पाउँछन् । अयोग्य मान्छेहरुलाई पार्टीले गरेर जस्तो हुँदैन ।
सर्दुको घटना (खोलाको गिटी बालुवा बिक्री) अब के गर्नु हुन्छ ?
म रोक्छु । तर ठेक्का लगाएर बेचिसकेको छ भन्ने सुन्या छु ।
उपमहानगरपालिकालाई राजस्व त चाहिन्छ नि ?
म त्यसको अन्तरवस्तु बुझ्छु । तर राजस्व बढाउनका लागि देश बेच्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब भात खानका लागि किड्नी वेच्छ नि मान्छेहरुले त्यही खालका कुरा हो यो पनि । धरान नगरपालिकाको राजस्व बढाउनका लागि सर्दु र सेउती बेच्नु पर्दैन । किन भने जब खोला बाटा ढुंगा उठाइन्छ त पानी दबिन्छ । धरानको प्राकृतिक कुरालाई बिगार्ने काम हामीबाट हुँदैन बरु अरु श्रोत खोजेर हामीले राजस्व बढाउनेतिर लाग्ने छौं । अघि भनेनी जिउ पाल्न लाई किड्नी बेचे जस्तो काम हामीबाट हुँदैन ।
तपाईं अभियन्ताबाट मेयर बन्नु भयो । अब सेवा सुविधा लिनु हुन्छ कि हुन्न ?
धरानभित्र हिँड्दा म मेरै मोटरसाइकल प्रयोग गर्छु । तर धरान बाहिर जाँदा मेयर जस्तो मान्छे मोटरसाइकलमा जाँदा धरानको बेइज्जत हुने भएकाले गाडी प्रयोग गर्छु । अरु त्यो केके तलब भत्ता सुविधा भन्छ नि त्यो पहिला बुझ्छु । अहिले नै लिन्न भनिहाल्दिनँ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ १३:४१